Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Bukayo Saka Carruurnimada Sheeko Dheer iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Sakinho". Sheekadeena Bukayo Saka ee Carruurnimada Dheeraadka ah Taariikhda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo kacsanaanta Bukayo Saka. Amaah TheSun iyo Nettheroy
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore & asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa iyo horumarintiisii ​​shaqo, noloshiisii ​​hore ee xirfadiisa, wadadiisii ​​sheeko caannimo, kacsi sheeko caannimo, xiriir, noloshiisa shaqsiyeed, xaqiiqooyinka qoyska iyo qaab nololeedkiisa iwm.
Haa, qof walbaa wuxuu u arkaa inuu yahay garabka ilmaha ee wejiga garabka ka ciyaara oo leh rajo weyn oo kubada cagta ah. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya Bukayo Saka taariikh nololeedkiisa oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bukayo Saka wuxuu ku dhashay the 5 maalinteeda Sebtember 2001 waalidiinta reer Nigeria ee ku nool magaalada London, Boqortooyada Ingiriiska. Waalidkiis waa soogalooti reer Nigeria ah kahor intuusan dhalan kahor wuxuu ka tagay Nigeria si uu u degto London si uu nolol fiican uhelo iyo fursado badan oo ay helaan caruurtooda aan dhalan.
Markuu dhashay, waalidkiis waxaa loo magacaabay “Bukayo”Oo ah magac aan caadi ahayn oo macnaheedu yahay“Wuxuu ku daraa farxad ". Bukayo waa magac si joogto ah loo isticmaalo Waxaa qoray qabiilka reer galbeedka ee koonfur galbeed Nigeria. Tani waxay ka dhigan tahay in Busayo Saka uu asal ahaan ka soo jeedo qowmiyadda Yoruba ee Nigeria.
Saka wuxuu ku koray magaalada caasimada ah ee Boqortooyada Ingiriiska ee London asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa qoys dabaqadda hoose ah. Aabihiis iyo hooyadiis waxay la mid yihiin muhaajiriinta Nigeria badankood Ma uusan helin waxbarashadii ugu fiicneyd ee dhaqaale laakiin waxay qabatay shaqooyin hoos-u-dhac ah oo marar badan la dagaallamayay lacag bixinno si loo daryeelo baahiyaha qoyska ee Boqortooyada Midowday iyo dibedda Nigeria.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Waxbarashada & Xirfadaha Shaqo
Sida dadka reer Nigeriya ee London badankood, xubnaha reerka Bukayo Saka waxay aad u jeclaayeen kubbadda cagta. Waxay ahayd jacaylka ay u qabaan kubada cagta iyo rabitaanka aan kala go 'lahayn ee lagu xoojinayo heerka noloshooda taasoo keentay tixgelinta Bukayo ku haysato waxbarashada kubbadda cagta London.
Hwaaliddiinta jecel kubada cagta ee taageera Arsenal, waa wax iska caadi ah in dhalinyarada Bukayo ay maskaxdiisa diirada saaraan sidii ay ugu dhigi lahaayeen akadeemiyada kooxda. Bukayo Saka aabihiis ayaa qaatay masuuliyada kaliya ee ah in wiilkiisu salka ku hayo oo is-hoosaysiiya dadaalkiisa si loo sugo tijaabada akadeemiyadeed ee lagu guuleysto. Erayadii Bukayo;
“Aabahey wuxuu ii ahaa dhiirigelin weyn. Laga soo bilaabo markii aan yaraa, wuxuu had iyo jeer i hayey salka dhulka '
Codsashada akadeemiyada kubbadda cagta ee Arsenal waxaa loo diyaariyey oo keliya ardayda sida runta ah karti u leh. Maadaama waalidkiis ay ogaayeen in Bukayo haysto waxa ay qaadataa, kama labalabeyn inay codsadaan. Waad ku mahadsan tihiin akadeemiga Arsenal ayaa wacay wuxuuna cadeeyay inuu mudan yahay, isagoo gudbiyey tijaabadooda. Waqtigaan, kibirka waalidkiis iyo xubnaha qoyskiisa ma oga xad lahayn.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Mudnaanta Hore
Saka wuxuu ku bilaabay shaqadiisa ArsenalAkadeemiyada Hale End ma aysan aheyn wax sahlan maadaama ay ka buuxiyeen allabaryo fara badan oo isaga iyo waalidkiis ah. Erayadiisa;
"Waxay ii ahayd dhib badan waalidkey inay i caawiyaan inaan halkaan imaado laakiin waxay had iyo jeer iskudayaan wax walboo ay igu siiyeen tababar."
Halgankaas wuxuu Saka siiyay dhiirigelin badan oo ka caawisay inuu si adag u shaqeeyo marwalba oo uu hubiyo inuu sida ugu fiican u bixiyay. Si la mid ah asxaabtiisa kooxda, Saka wuxuu qaatay sanam. Halka kuwo kalena la raaceen Thierry Henry, Dennis Bergkamp, iwm, wuxuu soo qaatay halyeeygii hore ee Sweden iyo Arsenal, Freddie Ljungberg kaasoo horey u ahaa macalin da 'yar oo kooxda ah.
Freddie Ljungberg wuxuu ka caawiyay Bukayo Saka inuu noqdo waxa uu maanta yahay. Sawir-amaahda Football365
Ka ciyaaraya akadeemiyada U15, Freddie Ljungberg wuxuu siiyay Bukayo Saka qeybta ugu fiican ee talo. Wuxuu ka caawiyay Saka inuu is-muujiyo oo uu si adag u shaqeeyo maadaama uu aamminsan yahay in wiilka yari waqtigiisa uusan ku jirin inuu noqdo ciyaaryahan sarre.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Waddada loogu talagalay sheekada
Wax kasta oo Freddie Ljungberg uu saadaaliyay oo ku saabsan isaga way noqotay. Sidii Saka uu u jirsaday 17 sano jir, waxaa la siiyay qandaraas qandaraas ah oo uu ka helay kooxda ka hooseysa 23. Sidoo kale, ka dib qaab ciyaareedyo taxane ah oo taxane ah ka dib, Saka ayaa sidoo kale loogu yeeray kooxda waa weyn ee kooxda.
Intii uu la joogay kooxda waa weyn, wuxuu bilaabay inuu raadsado fursad ciyaartan tartan si uu u iloobo mustaqbalkiisa una dagaallamo tartanka. Isaga oo ka hadlaya tartanka, barakicinta Alex Iwobi iyo Aaron Ramsey wuxuu ahaa mid ka culus tartan ka badan saaxiibadiisa kale ee akadeemiyada ka dhigta Reiss Nelson. Meesha aadka looga fiirsaday ayaa markii ugu horreysay timid 2018 / 2019 Europa League Final halkaasoo Saka uu markiisii ​​ugu horreysay ka tegay sumaddiisa isagoo leh qaab ciyaareed aad u wanaagsan.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Kusoo sharax sheekada
Dhamaadka 2018 / 2019 xilli labadoodaba way arkeen Aaron Ramsey iyo Alex Iwobi oo ka tegaya Arsenal kuna biiraya Juve iyo Everton. Tani waxay siisay Bukayo qolka inuu haysto tartan kayar, iyadoo hal qof oo cad cad uu u tartamayo booska garabka bidix.
19 Sebtembar 2019 wuxuu arkay Bukayo Saka oo leh cidhiidhi xagga xafiiltanka ka dhexeeya isaga iyo Reiss Nelson. Ma ogeyd?… Maalintaas, kaliya ma uusan dhalinin wax gool ah, wuxuu sidoo kale siiyay labo caawin oo qurux badan iyadoo Arsenal ay ku guuleysatay 3-0 kulankii Eintracht Frankfurt kulankoodii furitaanka ee 2019 – 20 UEFA Europa League. Hoos waxaa ku yaal gabal caddayn muuqaal ah.
Markii Bukayo Saka uu ka dhabeeyay riyadiisii ​​carruurnimada ahayd ee uu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Arsenal, wuxuu aabihiis si deg deg ah u siiyay FaceTime Call. “Lama hadli karin maxaa yeelay tababarayaashu waxay rabeen inaan galo qolka barafka si aan uga soo kabsado ciyaarta ka dib. Kaliya waxaan u taagay suulkeena midba midka kale" Wuxuu yiri.
Halkii aad ku burburin lahayd bilow caadi ah, garabka bidix wuxuu ka socday xoog ilaa xoog. At 18 sano iyo 125 Maalmo, Saka wuxuu noqday xiddigii ugu da'da yaraa ee Arsenal ah ee taariikhda Premier League ku bilowda kulanka Man Utd iyo Arsenal. Waxa kale oo uu la yaabay taageerayaasha ciyaarta iyaga oo barakacay Ashley Young.
Sida wakhtigii qorista, Bukayo Saka waxaa u arka taageerayaasha badankood inay yihiin balanta xigta ee quruxda badan ee jiilka garabka bidix ee Arsenal ka dib Freddie Ljungberg. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Xiriirka
Guul laga gaaro iyo sare u kaca baahida weyn ee kubada cagta Ingariiska, waxaa hubaal ah in taageerayaasha badankood ay weydiin lahaayeen haddii Bukayo Saka leeyahay gabar ama gabar. Haa! wajigiisa quruxda badan wuxuu u eg yahay weheliya qaabkiisa ciyaareed ee wuxuu hubaal ka dhigayaa inuu sare u qaado saaxiibka gabadha.
Weydiiso Gabadha Bukayo Saka. Amaah Sortitoutsi
Baadhitaano badan kadib, Waxay umuuqataa Bukayo Saka mid kaligiis ah (waqtiga qoraalka). Waan ognahay inay sabab u tahay dabeecada aan loo cafin ee kubbadda cagta Ingiriiska, Saka waa inuu doorbiday inuu diiradda saaro shaqadiisa halkii uu raadin lahaa gabadh saaxiib ah ama qof ay naagtiisa noqoto.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan dhihi karnaa Saka wuxuu sameeyay dadaal dheeri ah si looga fogaado wax iftiimiya noloshiisa gaarka ah. Xaqiiqdani waxay ku adkeynaysaa dadka wax qora ee sida annaga oo kale ah inay helaan macluumaad ku saabsan noloshiisa jacaylka iyo taariikhda shukaansiga. Si kastaba ha noqotee, wali waa suurtogal in uu lahaado gabar saaxiib ah laakiin wuxuu door bidaa in uusan shaacinin, ugu yaraan hadda.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Naftaada Shaqsiga
Inaad baratid Bukayo Saka Xaqiiqda Nolosha shaqsiyadeed waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan shaqsigiisa oo isku dhex jira arrimaha kubada cagta.
Bukayo Saka Xaqiiqooyinka Nolosha Qofka. Ku ammaano Twitter
Markaad hesho la kulanka, waxaad garan doontaa Bukayo Saka inuu ku nool yahay isla markaana aad adeegsan karto qaab farsamo leh oo loogu noolaanayo nolol habaysan. Sidoo kale, waa nin aad u saaxiib ah isla markaana hooseeya isla markaana si furan ugu furan taageerayaasha. Intii uu ku jiray tababarka, wuxuu fiiro gaar ah siiyaa tafaasiisha ugu yar wuxuuna hubiyaa in aan waxba looga hadhin fursad.
Ku soo laabtay Nigeria iyo xitaa Boqortooyada Midowday, saaxiibbada Bukayo Saka iyo milkiileyaasha waddanku waxay u arkaan inuu yahay hanti qaran oo ay tahay in laga ilaaliyo dhammaan kharashyada. Hoos ka daawo muuqaalka.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Qoyska
Bukayo Saka wuxuu ku faanaa abtirsiintiisa iyo xididdada Nigeria labadaba waqtiyo wanaagsan iyo kuwo xunba. Sida Mac-macaan, wuxuu ku faraxsan yahay inuu been abuuray dariiqa qoyskiisa ee madaxbanaanida dhaqaalaha dhamaanteed mahadsanid FOOTBALL.
Xubnaha qoyska iyo ehelka Bukayo Saka; hooyadiis, aabihiis, walaalihiis, abtiyaashiis, adeerkiis, abtiyaash, iwm, waxay hadda soo qaadaneysaa faa'iidooyinka lahaanshaha naftooda ee arrimaha kubbadda cagta Ingiriiska. Xilligan la joogo, all xubnaha qoyskiisa iyo qaraabadooda dhammaantood way leeyihiin waxay ku dhaqaaqeen ikhtiyaar mihiim ah inaadan raadsan aqoonsi dowladeed inkasta oo siyaabo badan oo lagula xiriiro warbaahinta bulshada.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - LifeStyle
Ku dhaqan ahaan garoonka dhexdiisa iyo farxaddiisa waa laba adduunyo oo kaladuwan Bukayo Saka illaa iyo inta noloshiisa laga hadlayo. In kasta oo uu aaminsan yahay samaynta Lacagta kubbadda cagta waa lama huraan, laakiin aasaaskiisa adag wuxuu ka caawiyay inuu dhaqaalahiisa ilaaliyo oo uu abaabulo.
Sida wakhtigii qorista, Bukayo Saka looma ogola in uu ku noolaado qaab nololeed si fudud looga arki karo baabuurta faraha badan, guryaha waaweyn iwm.
Bukayo Saka Hab-nololeedka- Wuxuu daw u yahay nolosha qaaliga ah
Dunida casriga ah ee gawaarida tooska ah iyo boggag badan oo warbaahinta bulshada ah oo muujinaya hanti iyo qaab nololeed qaali ah, waxaan dhihi karnaa Bukayo Saka ayaa ah daawo ka hortag ah.
Bukayo Saka Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Kaliya maahan dadka reer Niger ee Akaademiga ah: Arsenal FC Academy waxay si dhakhso ah hoy ugu tahay ciyaartoy badan oo asal ahaan kasoo jeeda Nigeria. Dhawaan laga soo bilaabo waqtiga qorista, akadeemiyada ayaa waxay bixisay heshiis deeq waxbarasho oo afar karti leh oo leh xididdo Nigeria - Laga soo bilaabo bidix ilaa midig waxaa ka mid ah Arthur Okonkwo, Armstrong Okoflex, James Olayinka iyo Xavier Amaechi.
Xiddigaha kale ee reer Nigeria ee Akaademiga. Amaah TheSun, BBC, ArsenalCore iyo Flickr
Diinta: Sida hoos ku xusan, qoraalkiisa 'Instagram' wuxuu ku qornaa “Ilmaha IllaahayQoraalkani wuxuu la mid yahay kan saaxiibkiisa Joe Willock. Anaga ahaan, waxaa jirta suurtogalnimo aad u sareysa in diinta Bukayo Saka ay tahay Masiixiyiin.
Bukayo Saka Diintiisa- Sharaxay. Amaahda IG
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrinta Bukayo Saka ee Taariikhda Caruurnimada iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Alan Shearer Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weyn
Joe Gomez Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano